Toeram-pamokarana mpamono vaika Hydraulika | China Hydraulika Static Pile mpamokatra mpamokatra, mpamatsy
VY Series Hydraulika Static Pile Driver
Video Maint ho an'ny Parameter teknika Parameter VY128A VY208A VY268A VY368A VY468A VY618A VY728A VY868A VY968A VY1068A VY1208A Max.piling pressure (tf) 128 208 268 368 468 618 728 868 968 1068 1208 Max9 8.7 7.9 7.4 7.4 8.1 6.7 Min 1.9 1.3 0.9 1.1 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 Fametrahana toradroa (m) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 Famindrana mikotrana (m) Fehintsoratra lavareny 1.6 2.2 3 3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 Pac marindrano ...
VY420A mpamily static hydraulic statics
VY420A hydraulic statics pile driver dia fitaovana fananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'ny tontolo iainana miaraka amina patanty nasionaly marobe. Izy io dia manana endri-javatra tsy misy fandotoana, tsy misy tabataba ary familiana haingam-pandeha haingana, antontam-bato avo lenta. VY420A hydraulic statics pile driver dia maneho ny firoboroboan'ny milina fanangonam-bokatra amin'ny ho avy. VY andian-tsarimihetsika mpamily setroka matevina dia manana karazany 10 mahery, ny tanjaka fanerena manomboka amin'ny 60 taonina ka hatramin'ny 1200 taonina. Amin'ny fampiasana fitaovana sy singa avo lenta, ny fampiasana ny famolavolana sy ny fomba fanodinana hay tsy manam-paharoa dia miantoka ny fahadiovan'ny rafitra hydraulic. Ny kalitao avo lenta dia azo antoka avy amin'ny lohany. SINOVO dia manome ny serivisy tsara indrindra sy ny endriny manokana miaraka amin'ny foto-kevitra hoe "Ho an'ny mpanjifa rehetra".
VY700A mpamily antontam-bato matevina
VY700A hydraulic static pile mpamily dia fototra antontany vaovao, mampiasa ny tsindry mahery vaika ny menaka novokarina, milamina sy mangina manery prefabricated pile nilentika haingana. Fandidiana mora, fahombiazana avo lenta, tsy misy tabataba sy fandotoana entona, rehefa miorina ny fototr'ilay antontam-bato, fananganana fikorontanana amin'ny tany kely ary fetran'ny fifehezana mora ampiasaina, kalitaon'ny fanorenana tsara ary toetra hafa. VY andian-tsarimihetsika mpamily setroka matevina efa niasa be tamin'ny faritra maro, indrindra amin'ny fananganana tanàna sy morontsiraka amoron-tsiraka.
VY1200A mpamily antontam-bato
VY1200A mpamily pile static dia karazana milina fananganana fototra izay manangana mpamily tavy feno static hydraulic. Izy io dia misoroka ny hovitrovitra sy ny tabataba ateraky ny fiantraikan'ny tantanana puile sy ny fahalotoan'ny rivotra ateraky ny entona entina mandritra ny fiasan'ny masinina. Tsy misy fiatraikany firy amin'ny fananganana eo akaiky eo sy ny fiainan'ny mponina ny fananganana.
Fitsipika miasa: ny lanjan'ny mpamily antontam-bary dia ampiasaina ho hery fanoherana handresena ny fanoherana ny fihenan'ny sisin'ny antontam-bato sy ny herin'ny fihetsiky ny tendron'ny antontam-bato rehefa manindry ny antontam-bato, mba hanindriana ny antontam-bato ao anaty tany.
Araka ny fangatahan'ny tsena, sinovo dia afaka manome mpamily antontam-bato 600 ~ 12000kn ho safidin'ny mpanjifa, izay afaka mifanaraka amin'ny endrika samihafa amin'ny antontam-bato mialoha, toy ny antontam-bato toradroa, antontany boribory, antontam-by H, sns.